Ukukhula Kwethebhulethi: Izibalo Zokusebenzisa Nalokho Okulindelwe | Martech Zone
Ngingumsebenzisi wethebulethi okhuthele… Ngine-iPad ne-iPad Mini eceleni kweMacBook Pro yami ne-iPhone. Kuyathakazelisa ukuthi ngisebenzisa amadivayisi ngamunye ngqo. I-iPad Mini yami, ngokwesibonelo, iyithebhulethi efanelekile yokuletha imihlangano kanye nohambo lwebhizinisi lapho kuhamba khona kakhulu futhi angifuni ukuhudula i-laptop yami nazo zonke izintambo ezidingekayo, amashaja, nezinsiza. I-iPad yami imvamisa ihlala eduze kombhede wami wethelevishini lapho ngithenga futhi ngifunda. Likhulu kakhulu ebhizinisini kodwa lihle ngasekhaya.
Amathebulethi nama-laptops aqede nya imakethe yedeskithophu. Ngo-2013, imakethe yedeskithophu ye-PC yehle ngama-98%! Ngisanda kuhlomisa kabusha ihhovisi lami lasekhaya futhi ideskithophu yathatha umhlalaphansi esikhundleni sesitendi se-laptop kanye ne Isibonisi seThunderbolt. Futhi umkhiqizo wami ekhaya unyuke kakhulu njengoba ngiphethe nje ilaptop yami phakathi kwamahhovisi futhi angidingi ukukhathazeka ngokufaka amashaja, ukudlulisa amafayela, njll.
Ngo-2013 ukuthengiswa kwamathebulethi kwaqhuma, kwanda u-68% omangalisayo ukufika kuma-unit ayizigidi ezingama-195.4 emhlabeni jikelele. Njengoba ukuthengiswa komhlaba wonke kulindeleke ukuthi kufinyelele kumayunithi ayizigidi eziyizinkulungwane ezi-1 ngonyaka we-2017, sekubaluleke kakhulu kubaphathi kuwo wonke amazinga ukuthi baqonde ukubaluleka kwamathebulethi nokuthi bawuthonya kanjani umjikelezo wokuthenga kanye nokubandakanya konke kwabathengi.
Ukuqinisekisa ukuthi isayithi lakho liyasabela ekusetshenzisweni kwethebhulethi - kanye nokusebenzisa okuphakathi kokudlulisa amehlo kokuthinta noma ukuthuthukiswa kohlelo lokusebenza - kunganikeza ukuthuthuka okukhulu ekubandakanyeni kwamakhasimende akho nezivakashi kanye nokuguqulwa. Iqiniso ukuthi, abasebenzisi bethebhulethi banemisebenzi ethile, njengokufunda nokuthenga, ukuthi bathanda kakhulu ukusebenzisa ithebhulethi yabo ngaphezulu kwesibonisi sabo seselula, ilaptop noma ideskithophu. Yini isipiliyoni esinjengabafundi bakho?
Tags: 2014mangaki amaphilisi athengisiweiwebhusayithi ephendulayoukukhula kwethebhulethiukwakheka kwamathebulethiizibalo zethebhulethiizibalo zokusebenzisa ithebhulethiizibalo zokusetshenziswa kwethebhulethiukuhamba nokusetshenziswa kwethebhulethii-usablenet
Jun 30, 2014 ku-1: 50 PM
Ngabe ukhona obheka ithebhulethi / pc yakamuva ye-Microsoft. Ngizoyithola namuhla bese ngizama ukucisha kuyo yonke imikhiqizo ye-Apple. Sawubona i-Apple! Ngiku-Macbook pro, iMac, ithebhulethi yakamuva ne-iPhone. F-lokho! Ithi sawubona ukuvula ubuchwepheshe!
Jun 30, 2014 ku-2: 00 PM
Ngingumuntu othanda i-Apple futhi angisibonanga isizathu sokusuka kubo uNancy.